किन कुबाटामा लाग्छन् केटाकेटी ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
किन कुबाटामा लाग्छन् केटाकेटी ?
फाल्गुन २१, २०७५ बिना थिङ
काठमाडौँ — गत फागुन ७ गतेको एउटा घटनाले मेरो ध्यानाकर्षण गर्‍यो । घटना संवेदनशील थियो । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–२, भंगाल सुन्दर बस्तीमा दलित महिला उत्थान बाल शिक्षालयमा उक्त घटना भएको थियो । बसाइका हिसाबले घटनास्थल मेरो छिमेकी वडामा पर्छ । घटनामा डीआर मेमोरियल स्कुलमा कक्षा २ मा पढ्ने १२ वर्षीय समुन्द्र मल्लले होस्टलको बेडमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका थिए ।
समुन्द्रले लेखेको ‘सुसाइड नोट’मा आफू रमिला (परिवर्तित नाम) को कारण मरेको उल्लेख गरेका थिए । अनुसन्धान क्रममा रमिला त्यही स्कुलमा समुन्द्रभन्दा माथिल्लो कक्षामा पढ्ने रहिछन् भन्ने खुल्न आयो । उनीसँग समुन्द्रले गएको तिहारमा भाइटीकासमेत लगाएका थिए ।
उनै किशोरी दिदीबाट पर्याप्त (समुन्द्रको अपेक्षामा) प्रेम, स्नेह नपाएको झोँकमा समुन्द्रले आत्महत्याजस्तो डरलाग्दो बाटो अपनाएको देखिन आएको छ । यस्तो घटना भएको यो पहिलो भने होइन । समय–समयमा यस प्रकारका अकल्पनीय समाचार सुन्दै आएका छौं । यसले हाम्रा केटाकेटी कुन मानसिकताबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
समुन्द्रको पृष्ठभूमि बुझ्दा पक्षाघातबाट पीडित उनकी आमा गाउँमा र बाबु भारतमा छन् । त्यसैले ऊ होस्टलमा बसेर पढिरहेको थियो । यसरी परिवार, आफन्त, साथीसंगीबाट लामो समयदेखि विछोडिएको बालकले कसैको साथ, माया खोजेको थियो । तर अपेक्षा विपरीत सम्बन्धित व्यक्तिबाट बेवास्ता गरिएको अनुभूति भएपछि डिप्रेसनमा पुगेर बालकले स्वयम्लाई जुन सजाय दिएको छ, त्यो भयावह छ ।
उत्तर बाल्यावस्था (६ देखि १२ वर्ष) दुःखपूर्ण वा समस्याग्रस्त उमेर हो । यसलाई बालमनोविज्ञहरूले नाजुक उमेरका रूपमा लिन्छन् । किशोरावस्थाको संघार र यौवनावस्था जस्तो खप्टिएको उमेरमा उभिएका यस उमेरका केटाकेटीले स्वभावतः विपरीत लिङ्गीप्रति संकोच र मायाको अपेक्षा गर्न थाल्छन् । मायाको परिभाषा उनीहरूका लागि जीवन बिताउने साथी नभई आफ्ना कुरा सेयर गर्ने र आफूलाई केयर गर्ने साथीको रूपमा लिएका हुन्छन् ।
यस्तो साथी उसको आमा, बाबु, दाइ, दिदी, शिक्षक अथवा सहपाठी जो पनि हुनसक्छ । उनीहरू आफ्ना समस्या बताउन र त्यसको समाधानार्थ कोही आफ्नो निकट होस् भन्ने चाहन्छन् । जब उनीहरू यसबाट बञ्चित हुन्छन् अथवा आफूलाई बेवास्ता गरेको महसुस गर्छन्, तब उनीहरूमा इर्ष्या, नैराश्य, कुण्ठा बढ्दै जान्छ । यसको उजागर तिनले जथाभावी सामान फालेर, फुटाएर, आफ्नो शरीरमा चोट पुर्‍याएर अथवा घरबाट भागेर गर्छन् । उनीहरूमा आवेग यसरी जन्मिन्छ कि यसको पराकाष्ठा आत्महत्या पनि हुनसक्छ ।
यसको अनुभव मसँग पनि छ । एक्लै हुर्किएको केटाकेटीमा अहम् ज्यादा हुन्छ । म पनि एक्लै हुर्किएको थिएँ । ११ वर्षकी हुँदा एकपटक आमाले मेरो कुनै गल्तीमा खुब झपार्नुभयो । एक–दुई थप्पड पनि खाएँ । म सानो मान्छे । मलाई त्यो सजाय ठूलो लाग्यो । मलाई लाग्यो, यो संसारमा मेरो कोही छैन । त्यसदिन म घरबाट भागेंँ । दिनभर म घरभन्दा परको खोल्साको ह्युमपाइपभित्र लुकेंँ ।
आफूप्रतिको बेवास्ता सम्झिएर घरिघरि घुँक्क–घुँक्क रोएँ । रातिसम्मै मलाई खोज्न नआए मैले मर्ने सोच बनाएँ । त्यतिखेर त्यो मेरोलागि आफ्नो ‘इगो’ फेर्ने सबैभन्दा उत्तम माध्यम लागेको थियो । तर साँझपख आमाले मलाई भेट्टाउनुभयो । मैले आमालाई ग्वाम्लङ्ग अंँगालो हालेंँ । सायद त्यसदिन आमाले मलाई नखोज्नुभएको भए मैले कुबाटो रोज्थेंँ ।
अहिले समय, परिवेश, प्रविधिले मान्छेलाई यान्त्रिक बनाउँदै लगेको छ । यान्त्रिक समय, यान्त्रिक प्रेम ! अभिभावकसंँग केटाकेटीको लागि समय छैन । घर बाहिर गएर खेल्न केटाकेटीलाई सुरक्षाको कारण अभिभावकले मनाही गरेका छन् । स्कुल बाहेकको अतिरिक्त समय केटाकेटी कोठामा कित भिडियो गेम खेल्न बाध्य छन् कि विभिन्न वेबसाइट चहार्न ।
इन्टरनेटको प्रयोग केटाकेटीले कसरी गरिरहेका छन् ? त्यसको अनुगमन गर्न अभिभावक चुकेका छन् । केटाकेटीलाई आधारभूत आवश्यकता जस्तै– कपडा, खाना, शिक्षा उपलब्ध गराएर मात्रै हुँदैन । उनीहरूलाई त्यो संँगसँंगै प्रेम, स्नेहको आवश्यकता हुन्छ । हामी उनीहरूलाई वास्ता गर्छौं भन्ने आभास दिलाउनुपर्छ ।
विविध कारणले यस उमेरका केटाकेटीको मनमा भावना गुम्सिरहेको हुन्छ । उनीहरू त्यो पोख्न चाहन्छन् । विश्वासिलो, प्रेमिल पात्रको अभावमा केटाकेटीहरू अस्थिर हुँदै जान्छन् । उनीहरूमा आफ्ना शारीरिक परिवर्तनबारे कौतुहलता हुन्छ । प्रेम, स्नेहको अभावले हृदय र मस्तिष्कमा छटपटीको भुमरी चल्छ ।
यो संकटकालीन समयमा केटाकेटीहरू कोही यस्तो साथी बनिदेओस् भन्ने चाहन्छन्, जोसँंग यावत पारिवारिक, मानसिक उद्वेग पोख्न सकियोस् । यस्तो समस्या अझ होस्टल, बाल आश्रम, विभिन्न संस्थामा बस्ने केटाकेटीमा बढी पाइन्छ । जो विविध कारणवश आमाबाबु तथा आफन्तबाट टाढिएका छन् । तिनीहरू संस्थाको नियममा बाँधिएका हुन्छन् । बिहान उठ्नेदेखि खाने, पढ्ने, खेल्ने लगायत क्रियाकलाप सिलसिलाबद्ध र कडाइसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एकातिर आमाबाबुको प्रेमिल काख हुँदैन, अर्कोतिर पट्यारलाग्दो बाँधिएको जीवन व्यतित गर्नुपर्दा उनीहरूले हीनताबोध गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो नाजुक समयमा उनीहरू आफ्ना दौँतरी, अग्रज, शिक्षकहरूबाट माया चाहन्छन् । उनीहरू ती आफूले नजिक ठानेका अथवा नजिक हुन मनपराइएकाहरूलाई शारीरिक स्पर्श (हात समाएर, कपाल चलाएर, काखमा लुटपुटिएर) गरेर आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्छन् । उनीहरूको मनोकांक्षा बुझेरदुई–चार मिठो शब्द बोलिदिए मात्रै पनि तीचङ्गा हुन्छन् । पढाइमा मन लगाउँछन् ।
अझ उनीहरूले बताउन चाहेका कुरा ध्यान दिएर सुनिदिए, समस्या समाधानमा सहयोग गरिदिए, आमाले जस्तै शारीरिक स्पर्शसहित माया दिए उनीहरू प्रफुल्ल हुन्छन् । विस्तारै उनीहरू आफैलाई पनि प्रेम गर्न थाल्छन् । उनीहरूमा जीवनप्रतिको मोह बढ्छ । प्रेमपूर्वक प्रस्तुत हुनसके केटाकेटीहरू खराबआचरण त्यागेर असल मार्गतिर हिँड्न सक्छन् ।
सामान्यतया अभिभावक, शिक्षकले केटाकेटीमा कहाँनेर समस्या छ भनी पत्ता लगाउनसके उनीहरूलाई जटिलतातिर जानबाट रोक्न सकिन्छ । तर केही केटाकेटीमा जटिल र विशिष्ट समस्या हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा भने परामर्शदाताहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । परामर्शले व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर उसको समस्या पहिचानमा जोड दिन्छ । आपसी स्वीकृति, विश्वास, बुझाइले परामर्शी र बालकबीच जुन सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, त्यसले बालकको जटिलता पहिचान पत्ता लगाउन सहयोग पुग्छ ।
परामर्श गोप्य हुने भएकाले केटाकेटीहरू निर्धक्क आफ्ना समस्या बताउँछन् । यसले गर्दा वातावरणसंँगको समायोजन र आत्माभिमुखीकरण प्रक्रियामा सहज वातावरण बन्छ । मनोवैज्ञानिक तवरबाट गरिएको उपचारले केटाकेटीमा भएको नैराश्य, आवेग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तसर्थ सम्भव भएसम्म विद्यालय, छात्रावास, बाल आश्रमहरूमा परामर्शदाताको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७५ ०७:५३
माघ १७, २०७५ बिना थिङ
काठमाडौँ — सिकाइ अनन्त छ । सिकाइबाटै व्यक्ति (बालबालिका समेत) ले आफूमा निहित ज्ञान, सीप, व्यवहार, मूल्य, क्षमतामा निखार ल्याउँछ । यसले मानिसमा घर, परिवार र समाजमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अन्तरघुलन वा समायोजन गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि गराउँछ ।
जसरी एउटै गह्रामा उम्रिएको बालीमा एकरुपता, एकरसता भेटिँदैन, त्यसरी नै एउटै उमेर समूहका सबै बालबालिकाका स्वभाव एउटै र उस्तै हुँदैन । उनीहरूको पारिवारिक वातावरण, सामाजिक परिवेश, वंशाणुगत गुण जस्ताको आधारमा पनि सिक्ने क्षमता निर्भर रहन्छ । कोही छिटै सिक्छन्, कोही विस्तारै ।
सिकाइ प्रक्रिया गर्भावस्थादेखि आरम्भ हुन्छ भनी वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् । यसैलाई आधार मानेर हेर्दा बच्चाको मानसिक र शारीरिक विकासमा उसको आमाको स्वास्थ्य, आचरण र परिवेशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । बालबालिका जन्मेको ५ वर्षभित्रमा उसको ९० प्रतिशत बौद्धिक क्षमता विकास भइसकेको हुन्छ । ८ वर्षको उमेरसम्ममा मानसिक विकास ८० प्रतिशत भइसक्छ । सामान्यतया यो केटाकेटीले आमा, बाबु तथा घरपरिवारसँग अत्यधिक समय बिताउने उमेर हो । यसैकारण पनि बालबालिकाको पहिलो पाठशाला घर हो भनिन्छ ।
बालबालिकाले आफ्नाले बोलेको, गरेको सुनेर–देखेर शब्द उच्चारणदेखि बानीव्यवहार निर्माण गर्दै जान्छन् । प्रत्यक्ष ज्ञानेन्द्रियहरूबाट प्राप्त अनुभव बाहेकको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैनन् । यतिखेर सिकेको कुरा बालकको हृदयमा गढेर बसेको हुन्छ । बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रियामा जति विद्यालय, शिक्षकले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ, त्योभन्दाबढ्ता अभिभावकको काँधमा त्यो जिम्मा रहन्छ ।
सिकाउने कामको मुख्य जिम्मेवारी विद्यालयले लिनुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ । त्यहाँ लगेर बालबालिका हुलिदिएपछि सिकिहाल्छ भन्ने सोच बलियो छ । हाम्रो बुझाइको गल्ती यसैमा छ । विद्यालय एउटा त्यस्तो संस्था हो, जहाँ बालकमा निहित क्षमता वृद्धि अथवा परिवर्तन गर्न आवश्यक परिवेश प्रदान गरिन्छ । बालबालिकाको उमेर, रुचि, क्षमता अनुरुप सिकाइको परिवेश उपलब्ध गराइन्छ । उनीहरूको आवश्यकता र क्षमता अनुरुप रचनात्मक वातावरण विद्यालयले दिनुपर्छ । सिक्ने बालबालिकाले नै हो । शिक्षकले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ । यो आलेखमा अभिभावकको उत्तरदायित्वबारे मात्र चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
बालबालिकाले विद्यालयमा भन्दा बढी समय घर, परिवार, समाजमा बिताइरहेका हुन्छन् । उनीहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक आचरणमा यही समुदायको प्रभाव परिरहेको हुन्छ ।
अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई कुन वातावरणमा घुलमिल हुनदिने, कुनमा नदिने, बालबालिकाको सामुन्ने कस्तो क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिने कस्तोलाई नदिने भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । बालबालिकाका अघिल्तिर प्रयोग गर्ने शब्दमा समेत अभिभावकले ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । हामी चाहन्छौं, बालबालिका आदर्शवान बनुन्, असल बनुन् । तर हामी नै उनीहरूसामु धूमपान, मद्यपान सेवन गरिरहेका हुन्छौं ! उनीहरूकै सामु झुट बोलिरहेका हुन्छौं । झैझगडा लगायतका गलत गतिविधि गरिरहेका हुन्छौं । अब स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, बालबालिकाले के सिक्छन् ?
बालबालिका स्वाभावैले जिज्ञासु, चञ्चल र अत्यधिक क्रियाशील रहन्छन् । बालबालिका आफ्ना कुतूहलता अभिभावकसँग पोख्छन् । अभिभावकले उनीहरूले सोधेको प्रश्नलाई भिँmजोको रूपमा लिने गरेको देखिन्छ ।
हामी चाहन्छौं, ती सबै कुतूहलता विद्यालयले शान्त पार्नुपर्छ ।
बालबालिका यति क्रियाशील हुन्छन् कि तिनीहरूसँग फाल्तु समय हुँदैन । केही न केही गरिरहेकै हुन्छन् । विद्यालय समय बाहिर (विद्यालयमा त अनुशासनको नाममा बाँधिएका हुन्छन्) उनीहरू अत्यधिक सक्रिय हुन्छन् । तर अभिभावकका आँखामा तिनको गतिविधि खेलमात्रै हुन्छ । यहाँनेर अभिभावकले बुझ्नुपर्छ, उनीहरू आफ्ना अवयवको सक्रियतामा धेरै कुरा सिकिरहेका हुन्छन् ।
अभिभावकले बालबालिका कस्तो गतिविधिमा संलग्न छन् भनेर समय–समयमा संवाद गरेर बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ, नकि झपारेर उनीहरूको क्रियाकलापमा दक्खल पुर्‍याउने । बालबालिका समय अनुसार प्रविधिप्रेमी बनिसकेका छन् । उनीहरूलाई त्यसबाट विमुख गराउने सोच्नुभन्दा त्यसको सकारात्मक प्रयोगमा प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
एउटा घटना यहाँ जोडिहालुँ । यो शैक्षिक सत्रको हिउँदे बिदामा कक्षा ६ मा अध्ययनरत मेरो छोरोको गृहकार्यको सूची अलि लामै थियो । विदाको दिन पनि उसको हरेक बिहान गृहकार्य ‘आतङ्क’बाट सुरु हुन्थ्यो । गृहकार्यमा सरस्वती पूजाको महत्त्वबारे निबन्ध पनि समेटिएको रहेछ । यसबारे उसले मलाई कुनै बेला सोधेको थियो । म व्यस्त थिएँ । सायद बताउन भ्याइन ।
एक दिन ऊ मोबाइल चलाइरहेको थियो । गृहकार्य नगरी मोबाइल खेलाएकामा मलाई एकदम रिसउठ्यो । मैले निकै ठूलो आवाजमा उसलाई गृहकार्य नगरेको भनेर झपारेँ । नजिकै गएर कान उखेल्न मन लाग्यो । ऊ त मोबाइलमा सरस्वती पूजाको महत्त्वबारे गुगल सर्च गरेर पढिरहेको रहेछ । सिकाइको यो नवीन पाटो अर्थात् प्रविधिमैत्री सिकाइलाई उसले राम्रोसँग लिएको देखेर म खुसी भएँ ।
व्यस्त जीवन बाँचिरहेका हामीबीच आत्मीयता, सम्बन्धको न्यानोपन विस्तारै कमजोर हुँदै जानथालेको छ । मानिस रुखो हुनथालेका छन् । मानिस बाँच्ने भनेको सम्बन्धहरूले पनि हो । यो अत्यन्तै व्यावहारिक सिकाइ र अनुभव पनि हो । यस्तो बेला विद्यालयले त्यो न्यानोपनको अनुभूति उपलब्ध गराउन सक्दैन ।
त्यसैले बालबालिकालाई समय अनुकूल पारिवारिक जमघट, सामाजिक गतिविधि (हाट–बजार, जात्रा, विवाह उत्सव, मृत्यु परम्परा) मा अभिभावकले संलग्न गराउनुपर्छ । यसबाट उनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका साथै नैतिकता सिक्न सक्छन् । यस्ता गतिविधि विद्यालयले चाहेर पनि गर्न–गराउन सक्दैनन् ।
अहिले प्रविधि, परिस्थितिले अभिभावक र बालबालिकाबीच नदेखिने खालको ‘पर्दा’ टाँगिदिएको छ । अभिभावकले आफ्नो जागिर, करिअर सम्हाल्ने धुनमा बालबालिकालाई पर्याप्त समय दिन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूको आवश्यकता के छ ? स्नेह–प्रेममा खाडल कहाँ परिरहेको छ ?
बालबालिकाका लागि उपयुक्त परिवेश कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारे कतिपय अभिभावक बेपर्वाह छन् ।
यो पनि बालबालिकामा सिकाइप्रतिको उदासीनता उत्पन्न हुनुको एउटा प्रमुख कारण बनेको छ । बालबालिका खुसी नभएसम्म सिकाइका लागि तत्पर हुँदैनन् । जबर्जस्ती सिकाइएको ज्ञान, कला अर्थहीन हुन्छ । बालबालिकालाई पर्याप्त समय, प्रेम–स्नेह र उनीहरूको न्युनतम आवश्यकतालाईसम्बोधन गर्ने कार्यप्रति अभिभावक हरदमसचेत हुनुपर्छ ।
प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ०८:३०